Soomaalida & Xaalka Geeska Afrika – Radio Daljir
Soomaalida & Xaalka Geeska Afrika
Maajo 25, 2020 2:43 b 1
Sanooyinkii la soo dhaafay waxa ay ahaayeen kuwo wata wanaag iyo dhib is huwan, waxaana kamid ahaa isbadaladii Geeska Afrika, maamulkii Tigray oo saaxada ka baxay iyo Oromada oo 27 sano kaddib xukunka Itoobiya qabsaday (Mengistu Xeyle Maryam iyo Abiy Axmed), xaaladaha Sudan, Eritrea, Djibouti iyo Yemen, muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, COVID-19, iyo marxalado kale.
Laakiin su’aal weli taagan, Soomaalina hortaal baa waxa ay tahay ‘horta Soomaalidu ma leedahay siyaasiyiin, akhyaar iyo odayaal maarayn kara oo haddana hagi kara xaaladaha murugsan ee Geeska Afrika?’
Jawaabtu waa mid weli la sugayo, laakiin dhibaatada haysata Soomaali guud ahaan waxaa loo sababeeyaa hoggaan xumo, dhaqankii iyo diintii oo laga dhaqaaqay, iyo duruufaha wakhtiga oo ka hiiliyay. In laga baxo se waa lagu rajo weynyahay.
Saas oo xaal yahay ayaa Soomaalidaas aan maanta xaalkeeda wada ognahay waxaa la odhan karaa waa uu ka wanaagsanyahay waddamo badan oo Geeska Afrika.
Xaalka Itoobiya ma aha mid dhib yar oo waxaa ka socda colaado ku salaysan diin iyo qabyaalad. Soomaalida kililka 5aad (Soomaali Galbeed ama Ogadeniya) cidhif ayey kaga jirtaa, siyaasadda Itoobiyana saamayn ayey ku leedahay, waxaa se maanta Soomaalidaas ku socda xasuuq, isir-sifeyn iyo barakicin NIDAAMSAN.
Barakicinta NIDAAMSAN ee lala beegsanayo Soomaalida Kililka waa mid ay ka dambeyso dowladda Itoobiya, gaar ahaan maamulka Oromada OPDO/EPRDF ee dalka xukuma. Siday ay hay’adda IOM ee Qaramada Midoobay soo bandhigtayna, barakacayaasha dalka Itoobiya 50% waa Soomaali.
Aan mar kale ku celiyo: Barakacayaasha Itoobiya oo qiyaas ahaan ku dhow 2 milyan, Soomaalidu waa ku dhawaad 50% ama 1 milyan!.
Ethiopia Displacement Crisis by Region
National: 1,733,628 IDPs#Somali: 847,510 IDPs (49%)
Oromiya: 623,913 IDPs
Tigray: 106,614 IDPs
Afar: 64,805 IDPs
Amhara: 55,072 IDPs
Gambella: 28,338 IDPs
DireDawa: 2,786 IDPs
Harari: 2,583 IDPs
(@DTM_IOM 10 Feb 2020) pic.twitter.com/gAVyHF4RdT
— Robleh Ahmed (@AhmedRobleh4) April 23, 2020
Barakacayaasha Soomaalidu waxa ay u badanyihiin:
101,911 Qoloji Babili
151,107 Gobolka Daawo
112,571 Gobolka Liibaan
Alle ka sokow, dhibbanayaashaas Soomaaliyeed waxaa maanta u maqan oo ay wax ka sugayaan waa Soomaali iyo hoggaanka Soomaalida.
“Xasuuqii Hawadaay, Balbalayti iyo intaas oo meelood oo kale wax ka soo qaad ma laha,” waa sida uu yiri hoggaamiye, ahna Kusimaha Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida (DDS) Mudane Mustafa Cagjar uu u sheegay BBC-da.
Mar kale, dhibka Soomaali haystaa waa hoggaan la’aan!
Cabdi Maxamuud Cumar, Madaxweynihii hore ee DDS, waxa uu u xidhanyahay Axmaaro (Orthodox Church), loomana haysto dhibaatadii Jail Ogaden iyo kumannaan shacab Soomaaliyeed (ka badan 60,000 sida dadka qaarki sheegeen) oo Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo Jeneraalada Tigray TPLF/EPRDF dileen ama xasuuqeen 10-kii sano ee la soo dhaafay. Saas oo ay tahayna waa suurtagal in Cabdi Maxamuud Cumar la soo daayo.
Haddaba maxay Cabdi Maxamuud iyo Mustafe Cagjar maanta ku kala duwanyihiin, kana simanyihiin?
Sida dhabbayaashu isku feer socdaan, baa maantana Mustafa Cagjar waxa uu dhinac socdaa dhabbihii Cabdi Maxamuud, waaba haddii uusan cagta saarin dabinkii lagu dilay kuwii ka horeeyay. Isla dabinkii ay dhigi jireen dhashii TPLF/EPRDF oo ka amar-qaadanaya OPDO/EPRDF. Oo haddana kaaga darane tabtii hore oo kale baa berrina waxaa la soo wadaa kuwo ka liita kuwa maanta iyo kuwii shalayba, wanaag laga sugaana warkiisa daa’!
Goormaa Soomaali dabinka lala damacsanyahay ku baraarugeysaa?
Saas oo maanta Soomaali dhabbayaasha Geeska Afrika loogu kadeedayo, haddana Soomaali guud ahaan waa hormuudka hormarka iyo isdhexgalka Geeska. Taas macnaheeduna ma aha in Soomaali seexato ama ay dad kale danaheeda u deysato. Soomaali waa in ay ka tashato maaraynta iyo ka faa’iideysiga kheyraadkeeda oo uu ku jiro kheyraadka iyo shidaalka Kililka 5aad. Dakadaha Soomaaliyeed ee Itoobiya la siiyey waa in laga tashadaa qaabka loo maamulayo, loogana faa’iideysanayo. Waa in laga tashado sida loo wajahayo barakacinta iyo amni-darrada lala beegsanayo Soomaalida Kililka.
Maanta Soomaali dhamaanteed meel kasta oo ay joogto waxaa la gudboon in ay isku tashato, kana tashato, una tashato arrimaha dhexdooda iyo waliba kuwa Geeska Afrika.
Allena aan ka barino hoggaan suuban iyo maamul caadil ah!
WQ: Axmed Rooble | Email: [email protected] | Twitter: @AhmedRobleh4
Dowlad Deegaanka Soomaalida 213 Wararka 20430
Abdinasir Moalin 2 months ago
Aad baad umahadsantahay mudane Axmed, Run ahaantii wax badan ayaad noo iftiimisay, Waxaa soomaali horyaala caqabado adag oo ubaahan in inta laturxaan-bixiyo laga gudbo. Waxaa intaa dheer hadayna soomaaliland iyo Koonfurtu heshiinin, midnimadana adkaynin, Waxaan ogahay qorshaha Oromo ama Itoobiya ay kudoonayso inay ku qaadato dakadaha Soomaaliya gaar ahaan somaliland. Mahadsanid mar labaad